I-PA Online Ukugembula Okulindelwe - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
I-PA Online Ukugembula Ukulindela Ukucabanga
Posted on December 4, 2019 Umbhali Andrew	Amazwana Off ku-PA Online Ukugembula Ukulindela Ukucabanga
Ngokuqala ukubheja oku-inthanethi ePennsylvania, amazwe aseMelika anquma ukuthi angagxuma yini. Isici esinqumayo singancika kakhulu ekutheni ingabe ukugembula kwe-inthanethi kwePennsylvania kuyaphumelela noma kuyasicaba.
Ngakho-ke ake sibheke izitayela zamanje ngaphakathi kwendawo yokubheja yasePennsylvania bese sithola ukuthi izinto zimi kanjani.
Ukubheja Kwezemidlalo Kuyakhuphuka
Ukubheja kwezemidlalo sekuyibhizinisi elikhulu ePennsylvania. Noma yiziphi izifundazwe ezicabanga ngokujoyina iqembu zidinga ukubheka izinombolo kuphela. Ngokuphothulwa kukaSepthemba no-Okthoba weNFL kanye nebhola lasekolishi, ukubheja kwezemidlalo ePennsylvania kugasele irekhodi lamaRandi ayizigidi ezingama- $ 241. Yamangaza njengoba lezo zinombolo zinjalo, kufakwa amaphesenti we-82 we-all wager, ubuqagele, online!
IFanDuel Sportsbook idlula lo mncintiswano, ithathe ingxenye yokubheja ibekwe ePennsylvania. UFanDuel yedwa uphathe ama- $ 114 million kuma-wager akwi-inthanethi.
Kumali engenayo kuphela, wonke ama-bookbooks ezinhlanu asekwe ePennsylvania athatha $ 10 million ngo-Okthoba.
Uma leso kungesona isizathu esizwakalayo sokuthi ezinye izifundazwe zingene esigcawini sokubheja online, siyini?
Izipesheli Zokudweba Okusha
Ukunikezwa okusha okushisayo kuyaqhubeka nokuyenga abagembuli be-Intanethi abase-Pennsylvania ukuze babhalise futhi bahlanganyele kwezokuzijabulisa. Izinombolo ezingakaze zibonwe ziyaqhubeka nokubhalisela ama-akhawunti, zinwebisa ichibi lokubheja futhi zinomthelela kulwazi oluphelele emphakathini wokubheja online.
Izwe kulo lonke elaseMelika liyabazisa njengoba iPennsylvania ikhipha amathuba abantu abangaphakathi kwemigqa yombuso ukujoyina umphakathi wokubheja online.
Kusho ukuthini lokhu kuwe? Kusho amabhonasi amahle afana nekhodi yebhonasi ye-PlaySugarHouse PA etholakala lapha: https://playsugarhouse.bonuscodepa.com/.
Izinketho eziningi zabadlali be-PA
IPennsylvania iyizwe elinabantu abaningi kakhulu lokubhalisa ukugembula okulawulwayo kuze kube manje. Ngenkathi uMbusi uTom Wolf esayina umthetho we-2017 wokuqinisekisa ukugembula ku-inthanethi, kwavula umnyango cishe wazo zonke izindlela zokubheja abakhethekile abazifunayo.
Ngokushaywa kwepeni, wavumela ngokomthetho amakhasino aku-inthanethi, imidlalo yezinganekwane yazo zonke izinhlobo, ukubheja kwezemidlalo kanye ne-poker. Njenganamuhla, kukhona iminikelo etholakalayo kuzo zonke izigaba futhi ngaphezulu kuhlelwe ukuvula. Nalu uhlu olusheshayo lwezinketho zokubheja eziku-inthanethi ze-PA.
Ama-PokerStars kaFox Bet
Amakhasino aku-inthanethi Ayeza Maduze
Amazwe azimisele ukubheka ukuthi la makhasino enza kanjani ezinyangeni ezizayo. Uma zisebenza kahle emalini yentela yombuso, lokhu kungaba ngomshayeli omkhulu kunabo bonke ekunqumeni ukuthi ngabe amazwe azokwamukela inqubomgomo yokuvumela ukugembula ku-inthanethi.
Izindawo Zokubheja Kwezemidlalo
Njengoba ubona ezinombolweni ezisekuqaleni kwalesi sihloko, ukubheja kwezemidlalo kuyaqala ePennsylvania. Imali engakaze ibonwe ingumphumela, futhi izifundazwe ezweni lonke zihlala phezulu futhi ziyanaka.
Njengoba ukubheja kwezemidlalo ePennsylvania kuqhubeka kukhula ngokuthandwa nemali engenayo, isibonelo sabo singaba yindawo egculisayo njengoba izifundazwe zicabanga ukudweba umthetho wokuvumela ukugembula.
Yini Okulandelayo Esikhathini Esizayo Sokubheja Nge-inthanethi ePennsylvania?
Izinto zibukeka zilungele umbuso othanda ukudlala. Ngonyaka olandelayo, lindela ukubona ukunikezwa kwamakhasino amasha namakhodi webhonasi anenzuzo wabo bonke abadlali abasha.
Khumbula, uma une-akhawunti enekhasino eku-inthanethi enamawebhusayithi azinze eNew Jersey nasePennsylvania, uzodinga ama-akhawunti ngakho kokubili. Lokhu kusho ukuthi uzokwazi ukusebenzisa ngokunenzuzo ukunikezwa kwebhonasi okokuqala lapho ufaka isicelo se-akhawunti entsha.
Ngenxa yemithetho ye-Federal, amasayithi wokubheja aku-inthanethi nezinhlelo zokusebenza kuzosebenzisa isoftware yokukhomba indawo ukukhomba indawo yakho. Uma ufuna ukudlala, qiniseka ukuthi ungaphakathi kwemingcele yezwe lasePennsylvania. Ukuzama ukuzungeza lo mthetho ngokusebenzisa i-VPN noma enye isoftware ukufihla indawo okuyo akuvunyelwe.
Izinhlawulo zingeza ngohlobo lwezinhlawulo ezinkulu noma ukuxoshwa kwiwebhusayithi yokudlala online. Amakhasino aku-inthanethi afuna ukuthi udlale, kepha afuna ukuthi ukwenze ngokusemthethweni. Ungazami ukwephula imithetho ngoba nakanjani ngeke ikubophele.
1 Ukubheja Kwezemidlalo Kuyakhuphuka
2 Izipesheli Zokudweba Okusha
3 Izinketho eziningi zabadlali be-PA
4 Yini Okulandelayo Esikhathini Esizayo Sokubheja Nge-inthanethi ePennsylvania?
5 Dlala Ngokomthetho